लोककविज्यू, आकाशमा बादलु डम्मै छ !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १६, २०७८ सरुभक्त
मियाँपाटनबाट केही समयको सन्निकट दूरीमा अवस्थित डाँडोमा मियाँहरूको चिहानस्थल रहेछ । चिहानस्थलमा खाल्डो खनेर धरतीमा समाधिस्थ गराउने मियाँहरूको परम्परा रहेछ । केही समयको प्रतीक्षापछि मुसलमान धर्म–परम्पराअनुसार, लोककविलाई समाधिस्थ गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भयो । विभिन्न जात, धर्म, सम्प्रदाय र परम्पराका हजारौं पोखरेलीले भावपूर्वक श्रद्धाञ्जली चढाए । मेरो स्मृतिविम्बमा अनेक तस्बिर नाचे–चल्मलाए ।
अली मियाँ ढल्केको उमेरमा पनि फटाफट अघि लागे । हामी युवाहरू पछि लाग्यौं । आधाभन्दा बढी दिनको पैदलयात्रापछि वागलुङ बजार पुग्यौं । रात परिसकेको थियो । होटलमा भोजन गरेर विश्राम गर्नुको कुनै विकल्प थिएन । सुत्ने बेला लोककवि र हामीमध्ये केही एउटा ठूलो कोठामा पुग्यौं, उनका कुराहरू सुन्न थाल्यौं, निरन्तर कुरा गराइको ऊर्जाले उनी थाकेको आभास हुन्थेन । मलाई लाग्यो, लोकगीत गाउँदै जवानीका दिनहरूमा अनेक डाँडाकाँडा हिँडेका लोककविका अभ्यस्त गोडाहरू यत्ति छोटो यात्राले किन थाक्न मान्थे र !
स्मृतिविम्बमा सुरक्षित पछिल्लो एक स्मृति । लोककवि ओछ्यान परेका छन् भन्ने खबर आएपछि– उनको मृत्युभन्दा केही साता पहिले– कवि तीर्थ श्रेष्ठ र म उनलाई भेट्न गएका थियौं । हामीभन्दा पाका उनका जेठा पुत्र हनिफ मियाँले हामीलाई उनी सुतिरहेको कोठामा लिई गए । कोठा अपेक्षाकृत अँध्यारो थियो । उनी कोठाको एउटा कुनोको खाटमा भित्तातिर फर्केर सुतेका थिए । खाटछेउको कुर्सीमा उनले छोरीसरह मान्ने लोकगायिका हरिदेवी कोइराला बसिरहेकी थिइन् ।
हनिफ दाइ र हरिदेवीबाट उनको स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी लियौं । अकस्मात् हनिफ दाइले रहस्योद्घाटन गरे– ‘के गर्ने बाबुहरू, बुबालाई यस्तो बेला चुरोट पिउनुहुन्न भनेर प्रतिबन्ध लाएको, रिसाइराख्नुभएको छ । बोल्नु नै हुन्न ।’
बूढो मानिसले तलतलको वशवर्ती भई केटाकेटी स्वभाव देखाइरहेका थिए । हामीले चुरोटको विपक्षमा सानोतिनो वक्तव्य दियौं । उनी यथावत् भित्तातिर मुख फर्काई सुतिरहे । हार खाएर हनिफ दाइले भने– ‘बुबा, तपाई चुरोट खाने जिद्दी गर्नुहुन्छ भने ल एक प्याकेट ल्याएर राखिदिन्छु, तर यसरी नरिसाउनुहोस् । सरु बाबु र तीर्थ बाबु आउनुभएको थाहा पाउनुभएन ?’
प्रत्युत्तरविहीन । प्रतिक्रियाविहीन । महाकविको चुरोट प्रेमझैं अली मियाँको चुरोटप्रेमले जीउमा क्यान्सर ननिम्त्याए पनि उनको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बाथ र स्नायुसम्बन्धी समस्यामा त्यसले निर्णायक असर पारेन होला भन्न सकिन्न । चुरोटमोह समयमै त्याग गर्न सकेका भए सायद उनले सहजै शतायु उमेर पार गर्थे ।
पृथ्वीनारायण शाहले युद्धकालीन हतियार निर्माण गरिदिने कालिगडको रूपमा पनि मुसलमानलाई झिकाएका थिए । अवश्य त्यस समयको आवश्यकताअनुसार, झिकाइएका मुसलमानहरू हतियार बनाउने दक्ष कालिगड थिए होलान् । सायद बाइसे–चौबीसे राजाहरूको समयदेखि नै दरबारका महिलाहरूको शृङ्गारका लागि पनि मुसलमानहरू झिकाइएका थिए । भारतमा मुसलमानहरू कालिगडका रूपमा मात्र होइन, शृङ्गार–प्रशाधन बेच्ने व्यापारीका रूपमा पनि चर्चित थिए । यसरी विभिन्न प्रयोजनमा आएका मुसलमानहरू नेपालमै बस्न र व्यवसायमा संलग्न हुन थाले । पोखरामा विभिन्न टोलमा बसोबास गर्ने मुसलमानहरूले मुख्य रूपले चुराको व्यापार गर्थे । त्यसैले अरूले उनीहरूलाई ‘चुरेटा’ भन्ने चलन थियो ।
अली मियाँको पारिवारिक स्रोतअनुसार, उनीहरू कास्कीका राजा कुलमण्डल शाहले भारतको लखनउबाट अङ्गरक्षकको रूपमा लिई आएका मोहमद हुसेनका सन्तान हुन् । लखनउका बादशाहले कुलमण्डल शाहको सुरक्षाका लागि मोहमद हुसेनलाई खटाएको भनिन्छ । पछि उनी विश्वासप्राप्त भएपछि र सम्भवतः उनको बहादुरीबाट प्रभावित भई कुलमण्डल शाहले उनलाई कास्की लिई आएका थिए र बहादुर अली नाम दिएका थिए । यस अर्थमा अली मियाँ सैनिक वंशमा जन्मेका थिए । आफ्नो युवावस्थामा उनी भारतीय सेनामा भर्ती पनि भएका थिए । दोस्रो महासमरमा उनी बर्मा फ्रन्टमा जापानीहरूसित लड्न पुगेका थिए । छुट्टीमा घर आएपछि फेरि फर्केनन्, नाम कटनी गरी यसै बसे । अनि धेरै कालपछि उनले यस्तो लेखे :
‘घर पनि छैन दाइ मेरो, डर पनि लाग्दैन कसैको’ भनी ठान्ने अली मियाँ ‘यो दुःखी रोएको किन कहिल्यै पनि फर्केन सुदिन’ भनी कारुणिक स्वर लहरीमा हृदय खोलेर गीत गाउँदै हिँड्थे । कवि बन्न दुःखै पाउनुपर्ने पुर्पुरोमा लेखिएको हुनुपर्ने रहेछ कि, थाहा भएन, तर अली मियाँले जीवनमा असंख्य दुःख पाए । दीन मोहम्मद र जाहुरा मियाँको तेह्रौं तथा कान्छो सन्तानका रूपमा जन्मेका अली मियाँले दोस्रो वर्ष नटेक्दै आमाको निधन भयो । त्यसको अर्को वर्ष नै बुबाको निधन भयो । तीन वर्षको उमेरमा पूरै टुहुरा बनेका उनी दाजु–भाउजूको संरक्षणमा हुर्के । त्यति धेरै भाइ–बहिनीहरू र आफ्नै सन्तानहरूलाई हुर्काउनुपर्ने जिम्मेवारीबीच दाजु–भाउजूको हैसियतको पनि एउटा निश्चित सीमा भयो होला । त्यही सीमाका अभाव र अप्रियताबाट सामयिक रूपले टाढा हुनका लागि पनि अली मियाँ बाल्यजीवनभर कुँडहरका फाँटहरू, वनहरूतिर रमाउन थाले । अरूले गाएका मीठा गीतहरू सुन्न र टिप्न थाले । गाउने अभ्यास गर्न थाले ।
यति धेरै पारिवारिक दुःख अली मियाँले कसरी सहे होलान् ? बाँचेका सन्तानलाई उनले कति सङ्घर्ष गरी हुर्काए होलान् ? अनि कनीकुथी अक्षर चिनेर, आफैं लेख्न सिकेर पनि धेरै मार्मिक गीतहरू उनले कसरी लेखे होलान् ? मलाई अली मियाँ एक चरम दुःखको कथाको नायकजस्तो लाग्छ, जहाँ नायकले आत्महत्याको कायरतापूर्ण बाटो नरोजेर सङ्घर्ष र सिर्जनापूर्ण वीरताको बाटो रोज्छन् !
अली मियाँको पहिलो कृति ‘विरक्त लहरी’ विक्रमाब्द ६ सालमा प्रकाशित भएको अभिलेख छ । त्यसपछि उनको ‘नेपाली झ्याउरे गीत संग्रह’ एघार सालमा, ‘न्याउलीको पुकार’ बाह्र सालमा, ‘पहाडको उद्गार’ पन्ध्र सालमा, ‘सेतीको सुस्केरा’ उनन्तीस सालमा, ‘उज्यालो भैसक्यो’ उनन्चालीस सालमा, ‘सम्झनाको दियो (पूर्वप्रकाशित रचनाहरूसहित) एकाउन्न सालमा प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
आफ्नो पहिलो कृति प्रकाशित हुँदा उनी एकतीस वर्षका थिए । कहिले ‘सुन्न पाए मुरली रन्को, पीर पनि हराउँथ्यो यो मन्को’ भन्दै, कहिले ‘यो वनमा छैन कि चरी, चरी भए बोल्दो हो क्यै गरी’ भनी पोखरा र आसपासका गाउँघर, रनवनमा डुल्दै, गीत गाउँदै हिँड्ने अली मियाँले वीस–बाइस वर्षको उमेरमा अक्षर चिनी कनीकुथी लेख्दा उनलाई कति भाषिक समस्या पर्‍यो होला ! तर, भाषासित जुध्दै सिर्जनाको बाटोमा अग्रसर भइरहने अभीप्सा देखाए । भनिन्छ, पहिलेपहिले उनलाई भाषिक अशुद्धि सच्याइदिने र कविताहरू साफी गरिदिने काममा साहित्यानुरागी ठाकुर सिग्देल र कवि तारा पाखेले सघाउने गर्थे । बीसको दशकसम्म पोखरामा न्यून संख्यामा साहित्यिक कार्यक्रम हुन्थे, साहित्य पठन गर्नेको सङ्ख्या पनि न्यून थियो, त्यसैले अली मियाँको प्रतिभा सानो स्थानीय घेरामा मात्रै सीमित हुन अभिशप्त थियो । पोखराकै बाटुलेचौर निवासी जनकविकेशरी धर्मराज थापा राष्ट्रिय स्तरमा देशभित्र र बाहिर चर्चित भइसकेको अवस्थामा पनि उनी राष्ट्रिय स्तरमा, नेपाली साहित्यको मूल प्रवाहमा अपरिचित थिए । यो अपरिचयको पर्खाल भत्काउन र उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा ‘लोककवि’ भनी स्थापित गराउन पोयुसांपले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
विक्रमाब्द चौंतीस सालमा हामी साहित्य/संगीतप्रेमी केही युवाले मिलेर ‘पोयुसांप’ स्थापना गरेका थियौं । पैंतीस सालबाट टिकटमा मुक्तक कार्यक्रम, सामूहिक साहित्यिक जयन्ती, अन्य स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका कवि गोष्ठीहरू गर्न थालेपछि हामीले पुराना अनुज कविहरू खोज्न थाल्यौं । मुकुन्दशरण उपाध्याय, भोलानाथ पराजुली, किञ्जल्क, तेजनाथ घिमिरे आदि अग्रज कविहरू भेटिए । त्यहीक्रममा अली मियाँ भेटिए । जनकविकेशरी धर्मराज थापा कहिलेकाहीँ काठमाडौंबाट पोखरा आएको अवस्थामा मात्रै भेटिन्थे ।
‘कहाँबाट पाल्नुभयो ?’ एउटा अतिशिष्ट भाषा र सोधाइ एक वरिष्ठ साहित्यकारबाट ।
‘पोखराका अली मियाँलाई चिन्नुहुन्छ ?’
‘ल, ढुंगा खोज्दा देवता मिल्यो । उहाँको एउटा किताब प्रकाशित भएको छ, लगिदिनुहुन्छ ?’
संजोगले भोलिपल्टै मलाई पोखरा आउनु थियो, आएँ । अली मियाँलाई पूरै किताब टक्र्याएँ । उनी असाध्यै खुसी भए । त्यसबेला मलाई लाग्यो, जीवनमा असङ्ख्य दुःख भोगेका अली मियाँको एउटा मात्रै दुःख वर्णन गर्न पनि यो किताब पर्याप्त नहोला, तब आत्मकथा कसरी हुन सक्छ ? तर, पछि मलाई महसुस भयो, यो सानो पुस्तिकाकार किताब प्रकाशित गरिदिएर हास्यव्यङ्ग्य साहित्यका भीष्मपितामह वासुदेव लुइँटेलले अली मियाँलाई चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका रहेछन् । आत्मकथालाई जति शब्दमा लेखे पनि अनात्मकथा हुँदैन ।
चालीसको दशक लागेपछि अली मियाँ धेरैका परिचित लोककवि भइसकेका थिए । दिन–परदिन उनको ख्याति चुलिँदै थियो । उनलाई पोखरा बाहिरबाट पनि सम्मानित/पुरस्कृत गर्न थालिसकिएको थियो ।
‘नमस्कार हजुर !’ अभिवादन गरेँ ।
‘बाबुलाई थाहा छ मेरो घर, मेरो मनको चौतारी कुन हो भनेर । म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ । तर, अहिले म ठूलो दबाबमा परेको छु !’ उनले मेरो हात समाते अनि बरबर्ती आँसु झारे ।
अली मियाँले आफ्नो जीवनकालमा कति गीत गाए, कति गीत–कविता रचे समयले अनुसन्धान गर्दै जानेछ । उनी लोकलय टिपेर सिर्जना गर्ने स्वभावका भएकाले उनका कति सिर्जना आफ्ना हुन्– होइनन्, सायद आफैं पनि भन्न सक्दैनथे । उनको सिर्जनाधर्मिता लोकसमर्पित थियो । उनले जीवनका दुःखहरूको गीत रचे, गरिबी–अभावहरूको गीत रचे, प्रकृतिको गीत रचे, संस्कृतिको गीत रचे, बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको गीत रचे, राष्ट्रियताको गीत रचे, शोषित–पीडित जनताका गीत रचे, क्रान्तिका गीत रचे, जातीय विभेदविरुद्धका गीत रचे, राजाहरूका गीत रचे, भगवान्हरूका गीत रचे, शान्ति र मानवताका गीत रचे । उनले समयको आवश्यकतामा गीतहरू रच्दै गए । उनका गीतहरू कविता थिए, कविताहरू गीत थिए । उनको यो सिर्जनात्मक लोककवित्व समालोचनाहरूले मूल्याङ्कन गर्दै जालान् । लोककविहरू/जनकविहरूको उर्वर भूमिमा उनीभन्दा बढ्ता सिर्जनशीलता र श्रेष्ठता भएका लोककविहरू/जनकविहरू पहिले पनि जन्मेका थिए, पछि पनि जन्मेलान् । तर, उनी आफ्नो चरित्रले सबैभन्दा अलग र अद्वितीय थिए । एक गरीब मुसलमान परिवारमा जन्मेको व्यक्ति नेपाली लोकजीवनका भाखाहरूलाई टिपेर लोकसाहित्यलाई धनी बनाउने कर्ममा आजीवन समर्पित हुनु, साथमा राम र रहिमलाई सधैं एक ठाउँमा राखेर सर्वधर्म समभावको जीवन बाँच्नु उनको अप्रतिम चारित्रिक वैशिष्ट्य थियो । सर्वधर्म समभाव उनको विचारमा मात्रै थिएन, जीवन बाँच्ने कलामै थियो । विश्वशान्तिका लागि उनले धार्मिक समन्वयको बाटो रोजेका थिए । उनी धार्मिक आतङ्क र विश्व आतङ्कवादले हुर्हुर्ती जलिरहेको विश्वका लागि एक सन्देश थिए । त्यही भएर मैले पत्रकार अमृत भादगाउँलेद्वारा लिखित उनको जीवनीमूलक पुस्तकमा ‘बुझ्न सके उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्ति हुन्’ भनेको थिएँ । तर, मेरो उक्त भनाइलाई बुझ्न सक्नुपर्नेहरूले बुझेनन्, अति प्रशंसा ठहर्‍याए ।
आखिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्ति भनेका को हुन् ? के जिजस, बुद्ध, मोहम्मद, कृष्ण हुन् ? तिनलाई पनि बुझ्नेहरूले बुझेर प्रचार नगरिदिएका भए कसरी यो स्तरका पूजनीय देवता हुन्थे ? हामी त्यस विश्वमा छौं, जहाँ पाकिस्तानकी एक शिक्षाप्रेमी बालिकालाई आतङ्ककारीहरूले गोली प्रहार गर्दा उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकी मानिइन् । उनको सङ्घर्षलाई मेरो पनि सलाम छ । ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका होइनन्’ भन्ने बौद्ध भिक्षु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानिन्छन् । विश्वमा ठूल्ठूला हिंसा गर्ने र आतङ्क मच्चाउने आतङ्ककारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानिन्छन् । तब आफ्नो सम्पूर्ण जीवन धार्मिक समन्वयमा बाँचेर कलमले मात्र होइन, जीवनले सन्देश दिने एक लोककवि किन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानिन सक्दैनन् ?
लाग्छ, हाम्रो तन–मनमा बादल लागेको छ । बादल यति बाक्लो छ कि त्यसले घामलाई पनि छेकेको छ, जूनलाई पनि छेकेको छ, ताराहरूलाई पनि छेकेको छ । अनि स्वच्छ आकाशको नीलाम्यता र प्रशान्तिलाई पनि छेकेको छ । लोककवि अली मियाँ यो विषमतापूर्ण अवस्थादेखि परिचित थिए, त्यसैले कसैबाट राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रियताको मान–पदवीको आशा नराखी निरन्तर सुमधुर ध्वनिमा गीत गाइरहन्थे :
आकाशमा बादलु डम्मै छ, मनमा के छ भन्नेलाई सम्मै छ...
प्रकाशित : श्रावण १६, २०७८ ०९:०४